Itshe Lamasiko, Itshe Lemvelo, Itshe Lodonga - LONGSHAN
1. Kulula ukufakwa, futhi ngentengo eshibhile. Lo mbala omnyama ogqamile wamatshe amasiko kulula ukufana nomunye umbala. Yenza umklamo wakho uphelele ngaleli tshe elimangalisayo lemvelo. 2. ...
Kulo mkhiqizo sibuye siwubize ngephaneli elimhlophe njengeqhwa, ubuso bubukeka njengeqhwa, lapho iphaneli elingaphansi kwelanga, kunendawo ethile ecwebezelayo ngaphezulu, ibukeka iyinhle kakhulu. Lobu ubuso obuhlukanisiwe bu ...
Ungomunye womkhiqizo odume kakhulu emakethe yamatshe, sithumela lo mkhiqizo kuwo wonke umhlaba iminyaka eminingi. Amathoni answempu athambile ahambisana nokwehluka kwemvelo nokufakwa kwamatshe ngamatshe. U ...
Lezi zinhlaka zamapuleti emvelo ziqukethe ama-browns ajulile, ama-grays namacebo wokugqwala.Sinikeza imibala ehlukahlukene, ukuqeda, ukwakheka, nezitayela kanye nokuxhumanisa izingcezu zekhoneni ukuze ukwazi ...
Lo mkhiqizo unama-multicolor, ubukeka umuhle kakhulu futhi ingaphezulu lawo asagcina ukuthungwa okungafani namatshe wemvelo nombala ngemuva kokukhiqizwa, inhlanganisela yokusika nokuhlanganisa. Kukhethwa kakhulu ku-d ...
Ungumkhiqizo othandwa kakhulu emakethe yamatshe, Ubuso busagcina ukwakheka kwetshe lemvelo eliyingqayizivele nombala ngemuva kokukhiqizwa, inhlanganisela yokusika nokuhlanganisa. Lonke iphaneli senziwa t ...
1. Yizingcezu ezi-4, ubude buphelele bungu-40cm. Phakathi kwe-5cm .Ubunjalo obujwayelekile ngu-Z no-S. Ubukhulu bungu-8-15MM, i-wight ilula kakhulu, ngakho-ke kulula ukuthwala nokwakha. 2. Yonke ifasitelana ...
1. Amaphaneli Wodonga Oluzacile Amatshe ayimichilo emide yamatshe ahlelwe ngephethini. Zinamathiselwe ndawonye okungcono zisetshenziselwe ukumbozwa kwangaphandle nendawo yokufaka umlilo. Isethi ngayinye yethayela iqukethe inhlanganisela ...
Ikesi lethu lomkhiqizo
Itshe le-Longshan lamiswa ngo-1988, linenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-10millon yuan. Etholakala eYixian, eBaoding City, e-Hebei eChina.Ukwenza i-longshan ibe yinhlangano yesimanje ngokucubungula, ukukhiqiza, ukuthengisa nokusebenzela…